Dzimwe nzira dzemahara dzeMicrosoft Office | Gadget nhau
Dzimwe nzira dzemahara dzeMicrosoft Office
Kubva zvairi yekutanga vhezheni, makore makumi matatu apfuura, Microsoft Office yave yakakwana chirevo munyika yekomputa paunenge uchigadzira chero mhando yegwaro, ringave gwaro remanyoro, pepa rekuparadzira kana mharidzo. Kwemakore mashoma ikozvino, nzira chete yekuishandisa iko kuburikidza nekunyorera.
Kana tikatsvaga zvishoma pamhepo, tinogona kuwana rezinesi regore rimwe chete rekushandisa Office 365 kwemamwe maeuro. Nekudaro, kana zvaunoda usapfuure nenhamba huru yesarudzo iyo Hofisi inoita kuti tiwanikwe kuburikidza nekushandisa kwayo kukuru, pazasi tinokuratidza nzira dzakanakisa dzemahara dzeMicrosoft Office.
Zvisinei nebasa redu richava rei, zvinowanzoitika kuti tinochengeta mafaera edu ese mugore, ingave Google, Apple, Microsoft kana chero imwe. Kugona kugadzirisa mafaera zvakananga kubva mugore pasina kuodhaunirodha kuchombo chedu ndechimwe chezviitiko zvikuru zvinopihwa nemunhu wese ipa huwandu hwakawanda kune vashandisi.
Hofisi 365 yakavakirwa papfungwa iyoyo, sezvo rezinesi rayo risingotibvumidze kushandisa mashandisiro aro pamhepo, kana shanduro dzakadzvanywa pakombuta yedu, asiwo inotipa nzvimbo yekuchengetera yakakwira zvakanyanya kupfuura izvo zvainotipa neakareruka account yeMicrosoft, 5 inosuruvarisa GB.
Usati watsvaga imwe nzira kuMicrosoft Office, zvakare isu tinofanirwa kufunga kuti ipuratifomu ipi yatinoda kuishandisa pairi, nekuti zvinoenderana nekuti ichave ipi, isu tinogona kushandisa imwe kana dzimwe sarudzo, dzese dzinoshanda zvakaenzana, kunyangwe dzimwe nguva dzichinyatsosiyanisa.
1.1 Inoenderana neese desktop uye mobile mapuratifomu
2 Mapeji, Numeri, uye Keynote
2.1 Inoenderana ne macOS kuwedzera kune iOS
3.1 Inoenderana neese desktop desktop
4.1 Inoenderana neese desktop uye mobile mapuratifomu
5.1 Inoenderana neese desktop desktop
6 Ndeupi akanakisa?
Inoenderana neese desktop uye mobile mapuratifomu
Kana iwe usiri kuda kuomesa hupenyu hwako kurodha pasi maapplication ausingazomboshandisa pakombuta yako, mhinduro yakanakisa yatinayo inonzi Google Docs, hofisi yeGoogle hofisi inomiririra zvinhu zviviri: hapana chikonzero chekuisa pakombuta yedu (kunyangwe ichikwanisa kushanda kana tichida kushanda pasina internet kubatana), nekuti inomhanya kuburikidza nebrowser yedu (kana iri Google Chrome zvirinani) uye izvo ndeimwe yeakareruka pamusikasezvo huwandu hwesarudzo dziripo hwakanyanya.
Docs, Sheets uye Masiraidhi ndiro zita reimwe nzira yeIzwi, Excel nePowerpoint iyo Google inotipa. Kuti uwane pfungwa yehuwandu hwesarudzo idzo Google Docs inotipa, isu tinogona kuti iko kunyorera Windows WordPad inotipa isu zvakafanana mabasa akafanana nemaDocs, pamwe iyo yekupedzisira inosanganisira zvimwe zvimwe.
Google Docs inoitirwa vese avo vashandisi vanoda kunyorera kuti vagadzire zvinyorwa zvemavara, maspredishiti kana mharidzo zvishoma nezvishoma. Chinhu chakanaka ndechekuti ndezvemahara uye yakawanda, kuti tikwanise kuwana nekugadzira zvemukati kubva kune chero chishandiso, ingave nhare kana desktop.
Mapeji, Numeri, uye Keynote
Inoenderana ne macOS kuwedzera kune iOS
Apple inotipa Hofisi yayo, yaimbonzi iWork, software inoumbwa neMapeji, Nhamba uye Keynote zvakaenzana neIzwi, Excel nePowerpoint zvichiteerana Kunyange chiri chokwadi kuti huwandu hwesarudzo huripo kwete zvakakwirira semuHofisiSezvo makore anoenda, iyo nhamba inowedzera uye nhasi ndiyo inopfuura imwe inoshanda yemahara imwe nzira kune vashandisi veApple zvigadzirwa.
Mapeji, Numeri uye Keynote, anowanikwawo paIOS uye mafaera ese akachengetwa mugore, saka tinogona ramba uchigadzira zvinyorwa zvatakasiya kubva ku iPhone yedu, iPad kana Mac. Iyi Apple suite, nekuda kwezvikonzero zviri pachena, inongowanikwa chete kune zvigadzirwa zveApple, saka kana usina Mac, unogona kukanganwa nezvazvo. Asi kana iwe unayo, ndiyo yakanakisa yemahara imwe nzira iripo pamusika.
Inoenderana neese desktop desktop
OpenOffice inowanikwa kune ese Windows uye Mac uye Linux. Ive iri pasi pemuraira weOracle uye Sun Microsystems, saka hatisi kutaura nezve yakaderera mhando software. Shure kweOpenOffice tinowana matatu mafomu akaenzana neIzwi, Excel uye Powerpoint, ine huwandu hukuru hwemabasa uye kuenderana nemhando yakashandiswa neMicrosoft mumagwaro ako.
Izvo chete asi izvo zvatinowana nezve software iyi ndeyokuti kunyangwe uchikwanisa kuvhura zvinyorwa zvemavara, maspredishiti uye mharidzo dzeHofisi, haugone kuendesa mafaera kune iwo mafomati.
Imwe suite yezvikumbiro zvinopihwa seimwe nzira yeHofisi inowanikwa mu WPS Office, seti yekushandisa kweAsia mavambo, ayo zvishoma nezvishoma akakwanisa kuwana nzvimbo mumusika. Iri basa rakazvarwa seKingsoft Hofisi muna 1988, saka ndomumwe wevakuru iyo yatinogona kuwana parizvino pamusika.
Munyori, Spreadsheets uye Mharidzo, dzakaenzana neIzwi, Excel uye Powerpoint iyo WPS OFfice inotipa. Iyi suite inowanikwa mahara kurodha pasi. Isu zvakare tine yedu yatinobhadharira vhezheni ine mamwe mabasa, asi kune vazhinji vashandisi, iro rekutanga vhezheni rinopfuura zvakakwana. WPS Hofisi inowanikwa paWindows, macOS, Linux, iOS, uye Android.
Isu tinopedzisa pfupiso yesarudzo dzemahara dzeMicrosoft Office ne LibreOffice, imwe yenzira dzakakurumbira pakati pevashandisi vakasarudza makore apfuura kuti vasiye Microsoft suite zvachose. Kusiyana neOfisi yeMicrosoft, LibreOffice inoumbwa nemaapplication akasiyana kuti agadzire akasiyana mafaera, kunyangwe ari zvinyorwa zvemavara (Munyori), maspredishiti (Calc), Gadzira uye gadzirisa masvomhu mafomula (Mat), Rongedza vector mifananidzo (Swedera) kana dhatabhesi kuburikidza hwaro.
Iyo fomati inoshandiswa neLibreoffice ndeyeODF, fomati iyo yaungave wakambosangana nayo nguva nenguva. Kunyange zvakadaro, iri 100% inowirirana nezvazvino nenhaka mafomati eMicrosoft, saka kuenderana kunopfuura kuvimbiswa. Izvo chete asi izvo zvatinowana muLibreOffice ndeyekuti inongowanikwa yeWindows, macOS neLinux, hapana mapuratifomu efoni.
Kune rimwe divi zvinoenderana nesisitimu yekushandisa yatinoshandisa. Kana isu tikashandisa macOS, yakanyanya kunaka sarudzo, sezvandambotaura ndeye Mapeji eApple, Numeri uye Keynote. Kana isu tiri kutsvaga kuenderana sarudzo yakanakisa ndeye LibreOffice. Asi kana izvo zvatiri kutsvaga iri multiplatform, Google Docs ndiyo chikuva chinotipa isu sarudzo zhinji.
Inofanira kutariswa panguva dzose izvo hapana yeaya maapplication ari kusvika par uye isu hatigone kurasikirwa zvakanyatsoenzana neHofisi, neizvi handisi kureva kuisa ushingi, zvinongedzo, matafura uye zvinhu zvakadaro. Kune mushandisi wenguva dzose ivo vakasarudzika sarudzo, asi kwete kumakambani makuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Applications » Dzimwe nzira dzemahara dzeMicrosoft Office
Kuguma kwekutsigira Windows 7 Chii chandingaite?
Ndeapi mawebhusaiti ane akanyanya matatu-bato trackers